''လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော့် ဇာတ်ကားလေးတွေ ထိပ်တိုက် မဖြစ်အောင် ရုံတင်ပေးပါ?? - Yangon Media Group
”လက်ရှိ ရုံတင်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော့် ဇာတ်ကားလေးတွေ ထိပ်တိုက် မဖြစ်အောင် ရုံတင်ပေးပါ??
လက်ရှိရုံတင်ပြသမှုစနစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြောလာတဲ့ သရုပ် ဆောင်မြင့်မြတ်ကို အခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – မြင့်မြတ်ဇာတ်ကားတွေချည်းပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရုံတင်ပြသ နေတယ်။ ရုံပြိုင်ပြဿနာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ – ရုံတင်တာကတော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဟို ဘက်ရုံတွေဒီဘက်ရုံတွေ အပြိုင်တိုက်တာကတော့ မကောင်းဘူး။ အမြဲ တမ်းဆိုရင် သိပ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်ဇာတ် ကားဆိုရင် နှစ်ကားတောင် မဟုတ်ဘူး။ သုံးကားဆင့်တာပေါ့နော်။ ဝိညာဉ်စိမ်းရယ်၊ ငဒူရယ်၊ ဘော်ဘော်ကထှော်ရယ် တိုက်တာ။ အရမ်း အန္တရာယ်များပါတယ်။ မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။ ရုံတင်ပြသပေးတဲ့ အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီလိုထိပ်တိုက် ကြီးတွေ တိုက်နေကြတာတွေကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။
မေး – အဲဒီလိုရုံတင်စနစ်အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာမျိုး ရှိလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာတစ်ခုက ကိုယ်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားကို အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရိုက်ကူးတာက လွဲရင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ အခုလက်ရှိ ရုံတင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် တော့ ကျွန်တော့်ဇာတ်ကားလေးတွေ ထိပ်တိုက်လေးတွေမတိုက်အောင် ရုံတင်ပေးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး – မကြာခင်မှာလည်း မှော်ကျောက်စာဇာတ်ကားကြီးက ရုံတင် ပြသတော့မယ်နော်။
ဖြေ – မှော်ကျောက်စာ ဇာတ်ကားမှာ ကျွန်တော်က ဒီဘက်ခေတ်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်။ နောက်ဟိုဘက်ခေတ်မှာလည်း ကာရိုက်တာတစ်ခုပေါ့နော်။ အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမှတ်တရတွေလည်းရှိတယ်။ နောက်ဇာတ်လမ်းကလည်း အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
မေး – မှော်ကျောက်စာ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အခက်အခဲ တွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အခက်အခဲက ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားက အရမ်းကိုပင်ပန်းတယ်။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရိုက်ခဲ့ရတဲ့တစ်ခုပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီဇာတ်ကားက ရိုက်တဲ့နေရာကလည်း ခြောက်နေရာ။ နောက် ရိုက်ကူးရေးကလည်း တစ်လအချိန်ပေးရတယ်။ အဲဒီတစ်လမှာလည်း ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ၁၅ ရက် လောက်က ညပိုင်းတွေရိုက်ရတယ်။ မိုးလင်းပေါက် တွေရိုက်ရတယ်။ နေ့ည၊ နေ့ည မိုးလင်းအထိကို ရိုက် ရတာ။ ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေ ဘယ် လောက်အထိ ကြိုးစားထားတယ်။ မကြိုးစားထားဘူးဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ လာကြည့်တာနဲ့သိမှာပါ။
မေး – ကလေးအဖေ ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွား တာတွေရှိလဲ။ သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်မျိုးတွေရှိလဲ။
ဖြေ – သားလေးရလာတော့ ပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ရှူတင်ပြီးရင်နည်းနည်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လျှောက် သွားတာတွေရှိတယ်။ တောင်သွားလိုက်၊ မြောက်သွားလိုက်၊ စားလိုက်၊ သောက်လိုက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အိမ်ပဲပြန်ချင်နေတာ။ အိမ် ပြန်ရောက်ရင် အမောပြေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သားကိုစိတ်ချမ်း သာအောင်ထားမယ်။ ပျော်အောင်ထားမယ်။ သူဖြစ်ချင်တာကို ပံ့ပိုး ပေးမယ်။ သားက ကျွန်တော်နဲ့တူတာ မတူတာ။ အဖေတူသား ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းထက်ကို ကျွန်တော်က သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ကဲရရင်ကို ကျေနပ်တယ်။
''ချစ်သူ ရှိလာရင်လည်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေး ဖြစ်ချင်မှ ပေးဖြစ်မယ်'' ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
ပိုမို အရွယ်ကျစေသော အကြောင်းရင်းများ
”အရင်တုန်းက ရုပ်ရှင်စက်အဖွဲ့တွေမှာ လိုက်တဲ့ အချိန်ကဆိုရင် တစ်ဖက်က စားဝတ်နေရေးအရ နံနက်ပိုင?
အာဖရိက ကစားသမားများကို လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အတွက် ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
ဒုတိယမြောက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းများ ကျုံးအရှေ့ဘက်၌ စတင် တည်ဆောက်၊ သုံးလအတွင်းြ?
ဘာစီလိုနာမှ မယ်ကွန်ကိုခေါ်ယူရန် အဲဗာတန်နှင့် ဂွမ်ဇူးအဲဗားဂရန်ဒီတို့ အပြိုင်ကြိုးပမ်းနေ